Israel: Mila manokatra varavarana ho an'ireo mpizahatany Palestiniana isika
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Israel: Mila manokatra varavarana ho an'ireo mpizahatany Palestiniana isika
Oktobra 24, 2018
Olona an-jatony avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao no nidina tany Jerosalema tamin'ny fihaonambe iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny fizahan-tany voalohany, rehefa niresaka ny paikady hiarovana ireo mpandeha amin'ny loza fampihorohoroana ny mpandahateny sy ny mpandray anjara.
"Fotoana mety izao satria nisy ny te hahafanta-javatra hihaino sy hifanakalo hevitra sy hevitra", Ilanit Melchior, Talen'ny fizahantany ao amin'ny Jerusalem Development Authority, mifandraika amin'ny The Media Line. "Amin'ny fanaovana ity fihaonambe ity dia tsy miezaka manafina ny olana amin'ny [fampihorohoroana] izahay fa mametraka izany amin'ny sarintany."
Nampijaliana ny Isiraely noho ny ampahany amin'ny fampihorohoroany, angamba ny Intifada Faharoa 2000-2003, niavaka tamin'ny baomba famonoan-tena Palestiniana tao anaty bisy sy tany amin'ireo kafe manerana ny firenena. Na dia teo aza ny fidinana lehibe tao amin'ny fizahan-tany taorian'izay, ny fanjakana jiosy tamin'ny 2017 dia nametraka firaketana ho an'ireo mpandeha ho avy, miaraka amin'ny mpitsidika 3.6 tapitrisa eo ho eo.
Na dia mitohy aza ny fifanolanan'i Israely amin'ny Palestiniana, ny iray tamin'ireo mpandahateny tamin'ny fikaonandoham-baovao dia nahagaga ny mpanatrika tamin'ny alàlan'ny fanolorana hevitra fa ilay firenena dia afaka, hampihena ny fampihorohoroana amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana fizahan-tany kely kokoa avy any amoron'i West Bank.
"Mila manokatra varavarana ho an'ireo mpizahatany Palestiniana isika," Brig. Jeneraly (ret.) Avi Bnayahu, mpitondra tenin'ny tafika israeliana teo aloha izay mitantana orinasam-panadihadiana momba ny dia izao, dia niady tamin'ny The Media Line. “Ohatra, misy mpivady palestiniana maro maniry te-hanan-tantely any Israel, na any amin'ny Ranomasina Maty na Eilat. Fa maninona no alefa any Alemana izy ireo? Ny fizahantany dia fomba iray tsara hanalana ny negativa ary handroso. ”
Amin'ny ambaratonga makro, ny tatitry ny Departemantam-panjakana navoaka vao tsy ela izay dia mampiseho fa nisy 8,584 ny fampihorohoroana eran-tany tamin'ny taon-dasa, ka nahafatesana olona 14,000 teo ho eo.
Raha ny ankamaroan'ny fanafihana dia nitranga tany amin'ireo firenena rotidrotiky ny ady toa an'i Iràka, Syria ary Afghanistan, ny zava-nitranga tany amin'ireo firenena somary milamina manomboka any Frantsa ka hatrany Torkia ka hatrany Thailand dia niteraka fiheverana ny amin'ny loza ateraky ny fanapahan-kevitry ny mpizahatany.
“Fanodinkodinana sary efa taloha be izay tsy eo afovoany Atsinanana ihany”, hoy i Dirk Glaesser, talen'ny fampandrosoana maharitra ao amin'ny United Nations Tourism Organisation, nanantitrantitra ny The Media Line. "Zava-dehibe ny fampiasana teknikan'ny marketing mba hampazava tsara ny toerana tena nahatonga izany, ary raha ny tokony ho izy dia ireo izay tsy tonga."
Ny iray amin'ireo lohahevitra afovoan'io fihaonana an-tampony io dia ny maha-zava-dehibe ny fanomezana ny tsirairay antsipiriany marina momba ny toerana sy ny fotoana nitrangan'ny fanafihana, mba hialana amin'ny fiheverana fa satria toerana iray manokana dia mety mikorontana toy izany koa ny hafa eo akaiky eo.
"Rehefa mahita ny sarintanin'izao tontolo izao ny sinoa ary mandinika ny haben'ny fireneny ampitahaina amin'ny sasany any Moyen Orient, raha misy olana any Syria dia heverin'izy ireo fa miparitaka eraky ny faritra izany, anisan'izany i Israel na dia tsy nisy zavatra nitranga tao aza," Roy Graff, Tale mpitantana ao amin'ny Dragon Trail Interactive, orinasa manamora ny fizahan-tany avy any Shina, no nanazava tamin'ny The Media Line.
Na izany aza, amin'ny ankapobeny, dia mihoatra lavitra noho ny mahita ny olana ateraky ny fitsidihana toerana iray na hafa. Noho izany, ny fahazoana vaovao marina eo am-pelatanan'ny mpizahatany dia mety tsy hamonjy ain'olona fotsiny fa hanome fiadanan-tsaina ho an'ireo mpiala sasatra izay misafidy ny hiroso amin'ny paradisa mikorontana indraindray.
KLM Tia an'i Indonezia hatramin'ny 1924: Douwe Egberts Coffee mampiseho ny antony
Nanavao ny fifanarahana ny Southwest Airlines sy Travelport